Omume 5 megide nrụgide akwara n’olu na ubu | Uwe elu, gbatịrị agbatị
5 Omume megide akwara olu na olu na ubu
26 / 03 / 2017 /0 Comments/i quality Articles, Mmega Ahụ na Mmega Ahụ/av ewute
Do na-eteta n'olu siri ike? A na-ewelite ubu gị n’okpuru ntị gị?
Gbalịa mee ihe omume ise a, nke ga - enyere gị aka imeghe nsogbu anụ ahụ ma mee ka akwara dị n’olu na ubu. Alala azụ ịkọrọ enyi gị nke nwere olu na-enye nsogbu.
Nke a bụ mmega ahụ 5 nwere ike ime ka akwara ike sie ike, dịkwuo mgbasa ọbara ma nye aka na-emekwu mmegharị na akwara na nkwonkwo. Akwara na ube na olu na ubu na - ejiko. Ihe omume ndị a nwere ike inyere gị aka belata nsogbu ahụ ike ị na-ewete ụbọchị niile. E kwesịrị imega mmega ahụ maka ahụike gị.
Enwere ike ịchọ ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ nwere ikikere n'ihu ọha yana yana ọzụzụ maka mmelite kachasị mma. Ihe omume ise a nwere mgbado anya na-abawanye na ịgagharị ma na-eme ka nsogbu ahụ dịkwuo ike. Nwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị na ibe Facebook anyị ma ọ bụrụ na i nwere ndenye ma ọ bụ kwuru.
Ndụmọdụ: Pịgharịa n'okpuru iji kirie vidiyo ọzụzụ na mmega ahụ dị mma ma na-agbatị megide olu siri ike.
VIDIO: Mgbatị 5 na-alụ ọgụ megide Stiff Neck na Neck mgbu
Mmega ahụ ise na ịgbatị ahụ nwere ike inyere gị aka idobe nsogbu ahụ ike na olu gị. A haziri ihe omumu ha ka ha nwee ike aru ha nma kwa ubochi na ndi ozo n’iile. Pịa n'okpuru ka ihu ihe omume.
Gụọ kwa: Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Uwe Obi Mgbu
1. "Cat na kamel"
Mmega ahụ “pusi na kamel” bụ ụdị mmekpa ahụ dị mma ma dị mma nke na -eme ka ọkpụkpụ azụ niile nwekwuo mmegharị. Aha ya bụ n'ihi na ọ na-agbada azụ ya dị ka nwamba wee hapụ azụ ya mikpu miri dị ka nke kamel. Ọ na-agbatị ma na-enyekwu nkwụsi ike n'azụ, obi na olu. Ọ bụ mmega ahụ dị egwu maka ndị chọrọ ịtọghe ike ya na ubu.
Nke a bụ otu esi eme mmega ahụ: Bido kwụrụ n'akụkụ anọ niile, jiri nwayọ wedaa ala gị gbadaa n'ala tupu nwayọ nwayọ, mana jisie ike na-eche ihu ụlọ. Tinyegharịa mmega ahụ maka 8-10 ugboro ugboro 3 n'usoro.
2. Mgbatị nke trapezius
Trapezius bu akwara nke eji bulie ubu. Yabụ mgbe ụbọchị ogologo, ọ dị gị ka ubu gị azụrụ n'okpuru ntị gị - mgbe ahụ ị nwere ike ịta ha ụta n'ụzọ nkịtị. Omume a na-eme ka ị jide n'aka na ị na-agbatị otu akwara a bụ onye na-enye aka na olu na isi ọwụwa.
A: Nke a bụ ọnọdụ ịmalite mgbatị a.
B: Tụpu isi gị n'akụkụ ma jiri aka gị wee nweta mgbatị ọzọ (ọ bụrụ na achọrọ). Should kwesịrị ị na-eche na ọ na-esetịpụ n'akụkụ nke ọzọ nke olu na ubé ala n'elu ubu ubu. Mgbatị a dị mma maka ndị na-arụ ọrụ ogologo oge n'ọfịs n'ụkpụrụ ọrụ dị iche iche, dị ka otu na-esi arụ ọrụ ọfụma elu trapezius. Jide eriri ahụ maka sekọnd 30 ma mekwaa ya 2-3 awa.
3. Mgbatị nke azụ na olu
Olu gị ọ na-adị gị ka ị kwụgidere isi gị ogologo ụbọchị niile? Eleghi anya ị nwere ya n'ihu ihuenyo PC? Mgbe ahụ, mgbatị yoga a bụ nke gị. Ọnọdụ yoga a na-emepe obi, na-agbatị akwara afọ ma na-eme ka azụ dị n'ụzọ dị mma.
Nke a bụ otu esi eme mmega ahụ: Malite site na i dinara ala n’ala na ọbụ aka gị gbadata n’ala dị n’etiti ọgịrịga. Mgbe ahụ dọpụta ụkwụ gị ma pịa elu ụkwụ gị ka ị pịa n'ala - n'otu oge ahụ jiri ike si azụ gị, ọ bụghị aka gị, bulie obi gị n'ala - ị kwesịrị ịnwe mmetụta na ọ gbatịrị ntakịrị na azụ - gbaa mbọ hụ na ị gaghị ewe oke . Mee ka ụkwụ gị kwụ ọtọ ma jide ọnọdụ maka ume miri emi dị 5 ruo 10. Tinyegharịa ugboro ole i chere na ọ dị mkpa.
4. ịgbatị usoro maka akwara obi na roller
Igwe urefụfụ nwere ike ịbụ nnukwu ihe eji emeghe obere oge n'agbata ubu na elu. A nwekwara ike iji ya gbatịa ahụ gị - dị ka mgbatị ahụ nke na-agbatị nke ọma na akwara obi / pectoralis.
Nke a bụ otu esi eme mmega ahụ: Dina ala na uhere di elu iji kwado ma olu ma azu. Biko mara na nke a na-arụ ọrụ na nnukwu ụfụfụ rollers (dịka a) na 90cm ogologo ma ọ bụ karịa. Mgbe ahụ gbatịa aka gị nwayọ nwayọ gaa n’akụkụ wee bugharịa ha elu ruo mgbe ị chere na ọ na-agbatị iru akwara obi. Jide ọnọdụ maka 30 - 60 sekọnd wee zuru ike. Tinyegharịa 3-4.
5. Paraspinal na-agbatị mgbatị (Stgbatị akwara n'akụkụ akụkụ nke spain)
Musculature nke na-aga n'akụkụ akụkụ nke spain ka ana akpọ akpọ paraspinal musculature - mgbe ogologo ụbọchị nke ọrụ static gasịrị, ọ ga-adị mma ịgbatị ihe a n'ụzọ dị nro. Nke a bụ mgbatị ahụ dị jụụ nke dị mma maka azụ, olu na ubu.
Nke a bụ otu esi eme mmega ahụ: Guzo ikpere gị ma mee ka ahụ gị gbasaa n'ihu. Debe isi gị n’elu ala ma gbatịa aka gị n’ihu gị ruo mgbe ị nwetụrụ ntakịrị ịgbatị na ntughari n’olu na elu azụ. Na-arụ ọrụ 3-4 nke oge nke 30 sekọnd.
Lee ihe omume 5 maka mgbatị anụ ahụ n'olu na ubu. Akwara na ube na olu na ubu na - ejiko. Omume ndị a nwere ike inyere gị aka belata nsogbu ahụ ma mee ka ị na - emegharị ahụ. Ọzụzụ a kwesịrị ka ahaziri onye ọ bụla.
Nkwado Onwe-Aka akwadoro maka Mgbu Mgbu na Ahụhụ Na-adịghị Ala Ala
mkpakọ Noise (dị ka mkpakọ sọks na-eme ka ụba ọbara ekesa akwara ma ọ bụ pụrụ iche na-emegharị mkpakọ uwe megide rheumatic mgbaàmà na aka)
Pịa na ihe oyiyi ahụ iji gụkwuo banyere mkpịsị aka mkpịsị aka.
Obere teepu (ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa na-egbu mgbu na-adịghị ala ala na-eche na ọ dị mfe ịzụ na elastics omenala)
Ịkpalite ebe bọọlụ (inyere onwe gi aka na-aru oru ahu ubochi nile)
Arnica ude ma ọ bụ Igwe eji ekpo oku (ọtụtụ mmadụ na-akọ ụfọdụ ihe mgbu mgbu ma ọ bụrụ na ha ejiri, dịka ọmụmaatụ, arnica cream or heat conditioner)
- Ọtụtụ mmadụ na - eji arnica ude eme ihe mgbu n’ihi nkwonkwo nkwonkwo na uru mgbu. Pịa na ihe oyiyi dị n'elu iji gụọ banyere otu esi eme ya arkinakrem nwere ike inye aka belata ụfọdụ ọnọdụ mgbu gị.
Alala azụ ịkpọtụrụ anyị na YouTube ma ọ bụ Facebook ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ihe yiri ya gbasara mgbatị ahụ ma ọ bụ akwara gị na nsogbu nke nkwonkwo.
Peeji ọzọ: I Kwesịrị Aboutmara Banyere Osteoarthritis nke n'olu
(Anyị nwara ịza ozi niile na ajụjụ niile n'ime awa iri abụọ na anọ.)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Øvelser-mot-muskelspenninger-i-nakke-og-skulder.jpg?media=1648573622 562 750 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2017-03-26 12:01:422021-03-27 13:05:075 Omume megide akwara olu na olu na ubu
Mgbuji | Ọkpụkpụ mgbu n'ime ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ 8 Uru Phenomenal Health Uru Site na Iri Mmanụ Olive